काठमाडौ २४ माघ । रेनोको लागि नेपालको आधिकारीक बितरक एड्भान्स अटो मोवाइल प्रालिले ‘रेनो वाउ अफर’ ल्याएको छ । माघ २४ गतेबाट सुरु भएको योजनामा उपभोक्ताले रेनोका कारहरु किन्दा कम्पनीले ८।९९ प्रतिशत व्याजदरमा फाइनान्स गरिने जानकारी दिएको छ। यस अफर ...
काठमाडौ २१ माघ । नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजले यामाहा एफजी२५ का राइडरहरुका लागि ‘एड्भेन्चरस’ तथा रोमाञ्चक ‘राइड आउट’को दोस्रो संस्करण आयोजना गरेको छ। उक्त संस्करण अन्तर्गत एफजी२५ राइडरर्सलाई यामाहाले आफ्नो नारायणघाट डिलर नविन अटोबाट ...
काठमाडौ ३ माघ । सुनको मूल्यले ५७ हजार रुपैयाँ नाघेको छ। अघिल्लो दिनसम्म प्रतितोला ५७ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको फाइन गुणस्तरको सुन मंगलबार ५७ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेकाले नेपालमा प्रभाव परेको नेपाल सुनचाँदी ...
काठमाडौं २६ पुस, । महिन्द्रा टु ह्वीलरको आधिकारिक वितरक अग्निमोटो इन्कले दशैँ, तिहार तथा छठको अवसरमा प्रस्तुत गरेको ‘सुनै सुनको वर्षा रानीहारसँगै विदेश यात्रा’ योजनाको लक्की ड्रमार्फत दुई विजेता घोषित गरेको छ। प्रत्येक १५ दिनमा रानीहार प्रदान गरिँदै आएको बम्परमा ...
काठमाडौ २३ पुस । घर निर्माणको मुख्य समय सुरु भएसँगै अघिल्लो वर्षको तुलनामा लागत बढेको छ। मुख्य निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेपपिछ समग्र लागत पनि बढेको छ। सिमेन्ट, छड र वालुवाको मूल्यमा बृद्धि भएसँगै निर्माण लागत पनि बढेको हो। सिमेन्ट र छडको ...
जनकपुरधाम, १९ पुस । ‘व्यावसायिक मत्स्यपालन अवसर र चुनौती’ विषयक दुईदिने कार्यशाला आज यहाँ शुरु भयो । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान र मत्स्य विकास तथा तालिम केन्द्रद्वारा आयोजित सो कार्यशालामा २ नं प्रदेशका अगुवा मत्स्य व्यवसायी र विज्ञहरूको ...
काठमाडौ १८ पुस । ग्लोबल आइएमई बैंकले ११औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा नयाँ कर्पोरेट/रजिष्टर्ड कार्यालय संचालनमा ल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जिवि नेपालले मंगलबार कार्यालयको उदघाटन गरे। वीरगञ्जमा रजिष्टर्ड कार्यालय राख स्थापना भएको बैंकले स्थापनाको ११ वर्षमा आफ्नै कर्पोरेट/रजिष्टर्ड कार्यालय ...
अलैँची खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढे सँगै ताप्लेजुङमा उत्पादनमा वृद्धि
ताप्लेजुङ, ६ पुस . अलैँची खेतीतर्फ कृषकको आकर्षण बढे सँगै ताप्लेजुङमा यसको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष दुई हजार ९४० मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको छ । यो पछिल्लो ६ वर्ष यताकै बढी उत्पादन हो । गत वर्ष ...
काठमाडौँ, २३ मंसिर । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मतगणना भइरहेको बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिएको भन्दै अनेरास्ववियु र अखिल(क्रान्तिकारी)ले आपत्ति जनाएका छन् । वाम गठबन्धनको पक्षमा ऐतिहासिक जनलहर देखा परिरहेको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा विपरीत अत्यावश्यक वस्तुमा ...
पाल्पा, १९ मंसिर । यस वर्ष जिल्लामा सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । फूल फुल्ने समयमा असिना पर्नु र विभिन्न किसिमका रोगको आक्रमणले सुन्तला उत्पादनमा कमी आएपछि किसान मर्कामा परेका हुन् । सुन्तला खेती गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारका ...
कालिमाटीमै प्याज १३० रुपैयाँ !
काठमाडौ १५ मंसीर । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमै प्याजको मूल्य प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ पुगेको छ। विगत एक सातामा प्याजको मूल्य ४७ प्रतिशतले बढेको छ। कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले गत बिहीबार प्रतिकेजी ८५ रुपैयाँ तोकेको प्याजको ...
किन बढ्यो प्याजको मूल्य ?
काठमाडौ १२ मंसिर । भारत सरकारको निर्यातसम्बन्धी नयाँ नीतिका कारण नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य आकासिएको छ । प्याजको निर्यातदर घटाउन भारतले न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा परेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर ...
महिन्द्राको नयाँ स्कुटर ‘गस्टो आरएस’ नेपाली बजारमा
काठमाडौ ९ मंसिर । अग्नि ग्रुपको सहायक कम्पनी तथा महिन्द्रा टु ह्विलरको आधिकारिक विक्रेता अग्निमोटो इन्कले नयाँ गस्टो आरएस नेपाली बजारमा प्रस्तुत गरेको छ यस नयाँ गस्टोमा १०९.६ सिसीको सिङ्गल सिलिण्डर, एयर कुल्ड इन्जिन समावेस छ, जसले ८ बिपिएच पावर ...
जाडोका कपडा पर्याप्त नआउँदा मूल्यमा व्यापारीको मनोमानी
काठमाडौ १६ कात्तिक । महाबौद्धमा नयाँ ज्याकेट किन्न गएकी सीता सुवेदी गत सोमबार रित्तै घर फर्किन्। कारणः मनपर्दो ज्याकेट नपाएर होइन। १५ वर्षकी छोरीलाई पोहोर साल एक हजार ५ सय हालेर किनेको ज्याकेटलाई यसपालि ३ हजार ५ सय मूल्य दिँदा ...
तेह्रथुममा उत्पादन गरिएको अर्गानिक चियाको माग बढ्दै
आठराई, तेह्रथुम, १३ कात्तिक । तेह्रथुममा उत्पादन गरिएको अर्गानिक चियाको माग बढ्दै गएको छ । गुणस्तरीय तथा अर्गानिक रूपमा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित चिया नेपालको विभिन्न बजारमा बिक्री हुनथालेको छ । व्यावसायिक रूपमा चियाखेती गर्दैआएका कृषकबाट उत्पादन भएको चियाको माग बढ्दै ...
आइफोन टेनको प्रि–बुकिङ खुल्ला
काठमाडौ १२ कात्तिक । एप्पलले आफ्नो दशौँ वार्षिकोत्सवलाई विशेष बनाउन सार्वजनिक गरेको बहुप्रतिक्षत आइफोन टेन (एक्स) को प्रिबुकिङ आजबाट सुरु गरेको छ। अनलाइन प्रिबुकिङ थालिए पनि यसभन्दा अघि भनिएको मितिमा भने यो फोन बजारमा उपलब्ध नहुने भएको छ। यस अघि फोन ...
अलैँचीको मूल्य घटेर प्रतिमन २५ हजार पुगेपछि किसान निराश
फुङलिङ, ताप्लेजुङ, ६ कात्तिक । सुजन दाहालले दुई वर्षअघि प्रतिमन रु एक लाख १० हजारमा अलैँची बेच्नुभएको थियो । अहिले जम्मा रु २४ हजारमा अलैँची बेच्नुपर्दा निकै खिन्न हुनुहुन्छ । बजारमा निरन्तर अलैँचीको भाउ घट्दै गएपछि स्थानीय कृषकमा निराशा छाएको ...
हुण्डाईको नयाँ ‘थ्री एस’ सेन्टर जनकपुरमा
जनकपुर ३० असोज । नेपालका लागि हुण्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टलले एकै छानामा सेल्स, सर्भिस र स्पेर पार्ट्स (थ्री एस)को सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित जनकपुर स्थित आफ्नो डिलर ओम अटोमोबाइलसको संयोजकत्वमा नयाँ थ्री एस सेन्टर उदघाटन गरेको छ। ...
काठमाडौ २९ असोज । तिहार नजिकिँदै गर्दा सुनचाँदी महँगिएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुन एक साताको अवधिमा प्रतितोला ९ सय रुपैयाँ तथा चाँदी २५ रुपैयाँले बढेको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य आज ...
बर्दिबास, २९ असोज । तिहार र छठ पर्व नजिकिएसँगै महोत्तरी जिल्लाका गाउँनगर बस्तीमा माटाका भाँडाको बिक्री बढेको छ । दीपावली र छठ पर्वमा कलश, दियो, घडा (गाग्रो) र छ्याँची (दही जमाउने भाँडा) र ढकनासहित नयाँ माटाका भाँडा प्रयोग गरिने मैथिल ...
डडेल्धुरा, १६ असोज । करिब एक सातादेखि डडेल्धुरामा पेट्रोल अभाव भएको छ । पेट्रोल अभावका कारण दशैँका लागि टीका लगाएर घर फर्किनेहरू र टीका लगाउन जानेहरूले सास्ती भोग्नुपरेको छ । डडेल्धुरास्थित फुटकर व्यापारी र पेट्रोल पम्पबाट नै बोतल तथा ग्यालेनमा ...
पोखराको होटल स्नोल्यान्डमा आधा छुट
पोखरा १० असोज । पोखरा लेकसाइडको होटल स्नोल्यान्डले नेपालीहरुको महान् पर्व दसैंको उपलक्ष्यमा पाहुनाहरुलाई विशेष छुटको प्याकेज ल्याएको छ । यी पर्वका बेला होटलले आफ्ना कोठाको रेटमा आधा छुटको घोषणा गरेको हो । ‘दसैंको बेलाका लागि मात्रै आधा छुट दिइनेछ,’ होटलका ...
पर्यटकीय मौसम शुरु भएसँगै दश लाख पर्यटक नेपाल आउने अनुमान
काठमाडौ, १० असोज । पर्यटकीय मौसम शुरु भएसँगै होटलहरु भरिन थालेका छन् । कतिपय आन्तरिक पर्यटक दशैँ, तिहार र छठलगायत चाडपर्वका कारण पनि अन्यत्र घुम्न निक्लेका छन् । सफा र अनुकूल वातावरणले पदयात्रा र पर्वतीय गन्तव्य घुम्न बाह्य र आन्तरिक पर्यटक ...
दसैँ सुरु हुँदै गर्दा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो
काठमाडौँ, ६ असोज । दसैँ सुरु हुँदै गर्दा सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ। घटस्थापनाका दिन सुन प्रतितोला ३ सय र चाँदी ५ रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुन पाँच दिनमै प्रतितोला ९ सय रुपैयाँले घटिसकेको छ। ...
नेपाल खाद्य संस्थानद्धारा खसीबोकाको मूल्य निर्धारण
काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाल खाद्य संस्थानले दशैँका लागि खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ । संस्थानले प्रतिकिलो बोका रु ४५०, खसी रु ४५५ र च्याङ्ग्रा रु ६७५ मूल्य निर्धारण गरी आजदेखि बिक्री वितरण गर्दैछ । दशैँका बेलामा मासुको ...